Buza Manje Buyekeza - Ukufundwa kwengqondo okuku-inthanethi
Ukufundwa kwengqondo ku-intanethi > Buza Manje Buyekeza
Ukubukezwa Okuphelele Kokubuza
Asknow iyinethiwekhi ye-psychic esabekayo futhi isebenzisa ezinye ze-psychics ezihamba phambili kanye nabafundi bekhadi le-tarot esizweni. I-Ask Now ukuphela kwenethiwekhi esiyibuyekezile enikeze nokufundwa ngeSpanishi nangesiNgisi. Banesiqiniseko sokuthi uzokwaneliseka ngokufunda kwakho kwengqondo ukuthi banikela ngesiqinisekiso sokubuyiselwa imali esingu-100%. Uma unganelisekile vele uxhumane nethimba labo lokuxhaswa kwamakhasimende futhi bazokubuyisela imali yakho, akukho mibuzo ebuzwayo. Ngisebenzisa Asknow kaningi ukuthola izeluleko, futhi ngithole ukuthi amanani abo ayebukeka emuhle kunawo wonke futhi eyisivumelwano esingcono kakhulu jikelele.
Asknow ubesebhizinisini iminyaka eminingana futhi ebengenye yezinsizakalo zokuqala zePsychic ukuqala ukunikela ngezinsizakalo online. Njengamanje ziphethwe futhi zisebenza ngaphandle kweFlorida ngakho-ke ungaqiniseka ukuthi uthola inkampani ongayethemba, hhayi inkampani yaphesheya kwezilwandle. Ukwaneliseka kwamakhasimende kuphezulu futhi muva nje bavuselele uhlelo lwabo ukuze ukwazi ukukhuluma nomeluleki owufunayo, noma ngabe engatholakali khona manjalo. Ufaka inombolo yakho yocingo bese uhlelo luzokushayela ngokushesha lapho sezitholakala. Banikela ngezinzuzo eziningi ezincane ezinye izinsizakalo ze-psychic ezingazithandi izinkanyezi zamahhala, nokufundwa kwengxoxo online.
AsknowInqubo yokuhlola imimoya imnandi. Cishe i-psychic eyodwa kwezingu-1 ezisebenzayo ziyaqashwa. Ama-psychics amasha asebenzayo anikezwa izingxoxo eziningana bese kuthi amakhono abo e-psychic ahlolwe. Ama-Psychics akhuthazwa ukugcina amakhasimende ajabule, futhi uma ethola izikhalazo eziningi kakhulu Asknow ngeke ngibavumele banikeze ukufundwa.
Okusanda Asknow ngivuselele iwebhusayithi yabo futhi kufanele ngithi kungcono kakhulu kunangaphambili. Bangeze isici esisha esibizwa nge- "call back" engisithanda kakhulu. Ake sithi i-psychic yakho oyithandayo iku-inthanethi kepha ayitholakali. Ungafaka inombolo yakho yocingo futhi izangoma zizokushayela ngokuzenzakalela ngokushesha lapho sezitholakala. Ama-beats aqinisekile alinde i-psychic yakho oyithandayo. Iwebhusayithi entsha kulula ukuyisebenzisa, iyashesha futhi ikusiza ukuthi uthole i-psychic enhle.
Asknow inokuningi okuhle kumakhasimende amasha. Thola imizuzu engu-15 ngo- $ 10 nje. Banikeza nokufundwa kwamahhala kwe-imeyili kuwebhusayithi, yize kuthatha izinsuku ezimbalwa ukuthola impendulo kungukuthinta okuhle. Ngincoma ukubhalisela i-newsletter yabo yamasonto onke yamakhuphoni kanye nezinye izinkanyezi eziqondisisa ngempela.
AsknowIthimba lenkonzo yamakhasimende lihle. Banesiqinisekiso sokubuyiselwa imali ngakho-ke uma unganelisekile ungacela ukubuyiselwa imali. Abahlinzeki ngenombolo yocingo yokusekelwa kwamakhasimende edumazayo, kepha iqembu labo lokusekela i-imeyili liphendule ezinkingeni zami kungakapheli imizuzu embalwa, futhi bebehlala bekwazi ukuxazulula izinkinga zami ngokushesha.